Chii chinonzi Google One uye chinoshanda sei, kuwana nzvimbo pane yako Android ▷ ➡️ Android Pop ▷ ➡️
Chii chinonzi Google One uye chinoshanda sei, kuwana nzvimbo pane yako Android, Google One chirongwa chekunyorera icho chinokutendera iwe kuti uwane nzvimbo yekuchengetera kushandiswa kuGoogle system services. Kana iwe usati wambonzwa nezvake, zvinongova nekuti iye akawedzera zvichangoburwa.
Sei tichikuudza? Chii chinonzi Google One uye chinoshanda sei, kuwana nzvimbo pane yako Android, zviri nyore kutaura: ichi chirongwa chingave chakakodzera huwandu hukuru hwevashandisi, zvese kune avo vari kutsvaga nhamba hombe ye gore rekuchengetedza nzvimbo kana vari ivo vanoda upload mifananidzo yako uye mavhidhiyo mumhando yepakutanga kuti uzviwane pane zvese zvishandiso zvakabatana neakaundi imwechete, kungokupa zano rekutanga.
Chii chinonzi Google One uye ndechei? kusunungura nzvimbo
Kutanga, chii chinonzi Google One. Sezvakatarisirwa, urwu chirongwa chekunyorera icho chinobvumira vanyoreri kutora mukana we nzvimbo yekuchengetera izvo zvinogona kuenderana nezvako zvaunoda. Google inoitsanangura seizvi: nzvimbo yezvinhu zvese. Izvo mune mamwe mazwi zvinoreva kugona kunakirwa neimwe nharaunda kushandiswa kwemafaira, mifananidzo, mavhidhiyo, mameseji, Etc.
Uye pano tinogona kupindura wechipiri wemibvunzo yatazvibvunza isu. Chii chakanaka? Zvakanaka, inoshanda kuchengetedza zvishoma zvezvose zviri mugore, nekuti Google One ibasa rinoita sedombo rekona yemamwe maMountain View masevhisi senge Google Drive, Gmail uye kunyanya Google Mifananidzo.
Naizvozvo, iwe unenge wanzwisisa kuti tiri kutaura nezve ndege ine tende dzinobata nzvimbo dzakasiyana, asi ese akabatanidzwa neyakafanana dhinomineta: Google neayo ekuchengetedza masevhisi.
Mashandiro anoita Google One
Izvi zvese zvinoshandura kune izvi: kutenga chirongwa chekunyorera ne Google One inoenzana nekuwana nzvimbo yekuchengetera yese masevhisi ataurwa. Uye kana tichiziva izvozvo Google inopa yakazara 15 GB yenzvimbo yemaharaKusarudza imwe yematanhatu akarongwa marongero zvinoreva kuve neyakawanda ndangariro inowanikwa yekushandisa neayo kana akawanda maakaundi.
Kuti uite izvi, ingo enda kune yakatsaurwa peji reGoogle One webhusaiti, kana enda kune inoenderana masevhisi anoshandisa iyo nzvimbo yakapihwa. Iwe unogona kubata chirongwa chako chero nguva, uchisarudza iyo inokodzera zvakanyanya zvaunoda izvozvi.
Paunenge iwe wafunga pane yako hurongwa, saka, zvichave zvinogoneka kushandisa yekuwedzera ndangariro ye mafaira akaiswa kuGoogle Drive, for mameseji uye zvinongedzo muGmail uye, pamusoro pezvose, in mapikicha kana mavhidhiyo akaiswa kuGoogle Mifananidzo, kuti neGoogle One vanozvironga. Izvo zvinokwanisika kurodha mu "Yekutanga Hunhu", ndiko kuti, pasina kumanikidza kana kudzoreredza chero mhando.
Uye nekuda kweiyo app zvinokwanisika tarisa zvese zvine girafu inoratidza iyo nzvimbo inogarwa nemasevhisi akasiyana (Dhiraivha, Mifananidzo uye Gmail), taura nenyanzvi dzakaitwa kuti dziwanikwe neGoogle, shandura marongero kana kuwana mabhenefiti akachengeterwa vadyidzani, chidzidzo chatinoisa mazwi mashoma ipapo.
Mitengo uye mabhenefiti enhengo dzeGoogle One
Asi tisati tasvika pamabhenefiti, ngatitaurei nezvemitengo. Google inopa vashandisi zvirongwa zvakati wandei kuyedza kufadza munhu wese.
Inotanga kubva kuchirongwa chakakosha pa1,99 euros pamwedzi kusvika pa299,99 euros pamwedzi yeiyo 30 TB package.
Mhinduro dzese dzinowana mabhenefiti akafanana. Kunze kwe basa revatengi zvakavanzika kuti ugamuchire rutsigiro rwezvigadzirwa zveGoogle nemasevhisi, pane zvekuwedzera zvekuwedzera zveboka remhuri uye nhengo zvinobatsira, kusanganisira kukanganisa mumahotera akasarudzwa, kukwidziridzwa kwezvigadzirwa zveGoogle, nezvimwe.
Nenzira iyi, Google inotumira vanyoreri veGoogle One nhau dzekupedzisira dzekubatsira, kupa mubayiro zvaunotenga nechikwereti chaunoshandisa muGoogle Store uye nezvimwe, mabhenefiti ese aunowana akatsanangurwa papeji ino.
Google One inowanikwa uye inogona kushandiswa pane chero Smartphone, Hwendefa kana komputa ichizviona sezviri nyore nzvimbo yekuchengetedza data kuburikidza nemasevhisi akasiyana akanangana. Iyo app yatanga tichitaura nezvayo yakachengeterwa nhengo dzakanyoreswa chete uye unogona kuikanda kubva kuGoogle Play Store.
Naizvozvo, ibasa rinofanirwa kutariswa nemunhu wese anoshandisa iyo Google maapplication uye masevhisi neimwe frequency uye kuti ichiri kuda imwe nguva yekupararira pamwero mukuru. iwe unofungei nezvazvo? Wakatobhadharira kuchirongwa chekunyorera? Regai tizive zvirevo zvako pazasi.
Ungachinja sei Android Auto Wallpaper kune imwe tsika